माडीका विभिन्न वडामा १२ वर्ष वडा सचिव र पाँच वर्ष उपमेयर भएर उनले काम गरेकी छन् । माडीमा लोकप्रिय मानिने महतो, यहाँका आदिवासी, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत माडीवासीको समस्या र पीडाको बारेमा जानकारी राख्छिन् ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर मेयरकी उम्मेदवार तारा कुमारी काजी महतोसँग कुलप्रसाद काफ्लेले गरेको कुराकानीको अंश :
एमालेले तपाईँलाई नै माडी नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार किन बनाएको होला ?
म नै उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर मैले पार्टीलाई कहिल्यै दबाब दिइनँ । मैले कसैलाई तेरो मेरो नभनी काम गरेँ । कसैलाई पनि कुनै विभेद नगरी काम गरेँ । मेरो अनुभव, इमान्दारिता र लगनशीलतालाई मूल्याङ्कन गरेर नै पार्टीले मलाई अगाडि बढाएको होला भन्ने मलाई लागेको छ ।
माडीमा भुमिहिन सुकुम्बासीका समस्या छन्, जंगली जनावरका समस्या छन्, ठाडा खोलाहरुको समस्या छ ।भूमिखण्डिकरणको समस्या छ यि समस्याको समाधान कसरी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटोको सुधारका लागि हामी दुई–तीन पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन पनि गयौँ । कानुनी हिसाबले पनि त्यहाँ अवरोध छ भने अन्य कुराहरु पनि छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा परेको हुनाले अन्य निकायहरुले पनि अनुमति दिनुपर्ने, आफ्नै खुसीले बनाउन नपाइने जस्ता कुराहरु छन् । निकुञ्ज सम्बन्धि ऐनका कुरा छन् ।
यसमा हामीले सहजीकरण गर्न धेरै प्रयास गर्यौं । यही कारणले यतिसम्मको बाटो निर्माण भएको हो । हामीले यसलाई धुलोरहित बाटो बनाउने भनेर पनि काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले सोचेको हो । तर, विविध कारणले त्यहाँ अहिले रोकिएको छ । यसलाई अगाडि बढाउँछौं । जंगली जनावरबाट हुने मानवीय र अन्य भौतिक क्षति कम गराउन तारवार लगाउने योजना पनि छ । निकुञ्जसँग समन्वय पनि गछौं ।
मतदातालाई केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
[…] यो पनि…‘माडीवासीको शिर निहुरिने काम गर्दिनँ… […]